के प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले साथ दिएकै हो ? - Himali Patrika
के प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले साथ दिएकै हो ?
हिमाली पत्रिका १३ जेष्ठ २०७८, 7:57 pm
१३ जेठ, काठमाडौं। यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले साथ दिएको विषय जोडतोडले उठिरहेको छ । नेपाल मामलाका जानकार भारतीयहरु नै ओलीलाई भारतको साथ मिलेको बताइरहेका छन् ।